ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၂-၂-၂၀၁၃)
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၂-၂-၂၀၁၃)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 7:08 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု နှင့် အခြားဆုများ ရ တာ အပေါ် တိုင်းပြည် အတွင်း ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြဿနာများအားလုံးနှင့်ပေါင်းပြီး ရောထွေး စွပ်စွဲရေးသား ဖို့မသင့်တော် သော အသိဥာဏ် ဟု ပြောချင်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆနးစုကြည် ကိုပဲ ပြောနေကြလား
တိဗက်က Novel ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရသွားတဲ့ ဒလိုင်းလာမ ဘုန်းတော်ကြီးဆိုရင် ဆုလဲရပြီးရော သူဟာနိုင်ငံရေးက အနားယူမယ်လို့ကြေညာပြီးဘာနဲ့မှမပတ်သက်ပဲနေလိုက်တယ် ။ ဒေါ်အောင်းဆန်းစုကြည်ရဲ့စိတ်နဲ့နှုင်းကြည့်
ကာတွန်းဆရာ များသည် ခေတ်နှင့်အညီ အတွေးအခေါ်ပွင့်လင်းသည့်အပြင် ကိုယ်ခံစားယုံကြည်သည်များကိုရေးသားဖော်ပြရဲသည့်အတွက် လေးစားလျက် ဆက်လက်ပြီး လွတ်လပ်စွာရေးသားရင်ဖွင့်နိုင်ပါစေ။ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်မှမရှိသော်လည်းရိုးရိုးသားသား ဖြူဖြူစင်စင် ယုံကြည်တာကိုတင်ပြပြီးသမိုင်းတစ်ခေတ်ကျန်စေမည့်
ရှေ့ကနေလဲဦးဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစကမရှိ နောက်ကနေလဲကောင်းကောင်းမလိုက်ချင်။ ဒီလိုလူတွေကြောင့် တိုင်းပြည်တိုးတက်မှုတွေနှေးကွေးနေတာ။ အမြင်မတူတာတွေ တင်ပြတာကတော့ လူတိုင်းရဲ.လွတ်လပ်ခွင့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်တင်ပြမှုက နိုင်ငံတိုးတက်မှုအတွက် အပေါင်းလား၊ အနုတ်လားဆိုတာ ပြန်စစ်ဆေးကြည့်သင့်တယ်။
ခေတ်နဲ့ အညီ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာ ရေးစွဲ ရာမှာ သမိုင်းတစ်ခေတ်မကျန်ရစ်ပဲ ကိုယ့်စိတ်ကူး ထင်ရာလျှောက်စွဲလို့ အများက သောက်ပေါ စာရင်းသွင်းရင်လည်း ခံစားနိုင်ပါစေ
ခံစားနိုင်ပါတယ်ဗျား။ ချီးမွမ်းခံဖို့လည်းမရေးဘူး။နဂိုကတည်းကသောက်ပေါပြောလည်းဂရု မစိုက်လို့ကာတွန်းဆရာလုပ်တာ။ ဆုရဖို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး အများကြိုက်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။လာဘ်မျှော်ပြီးလည်းမဆွဲဘူး
ထင်ရာလုပ်တာကွာ အဲဒါ ကာတွန့်ဆရာတွေရဲ့သွေးပဲ။
These stones and bricks are from Dr Lun Swe and Groups.
True Leader မြန်မြန်ပေါ်ပါစေ
အင်း ... ဘယ်သူ့မှမယုံရဘူး ဒီတော့
ငါပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းလုပ်ချင်ပါ တယ် ဒါပေမယ့် ဘာပညာအရည်အချင်းမှမရှိဘူး
ကိုလွဏ်းဆွေကိုတော့လဲ့စားပါတယ် ဒါမေမယ့် ဒီဒေါညု့ကိုတော့ဘလော့မှာဘယ်တော့မှမတင်ပါနဲ့ကျေူးဇူးပျူပြီတော့ဗျာ
MMT ရဲ့ကော်မန့် ကို ကြိုက်တယ်။
တာတော့ရင်နာတယ်။ တောင်ကြီး လွယ်လင် နမ့်စမ်
ကွန်ဟိန်းတံတား သံလွင်တံတား တာကော်
ကျိုင်းတုံခေ်ါပျင်းမနား မယ်ယန်း စတဲ့စစ်ဆေးရေး
ဂိတ်တွေမှာ ရဲ ယာဉ်ထိန်း လဝက လူကုန်ကူး
အကောက်ခွန် သစ်တော ဒါတွေကပိုက်ဆံပေးမှ
သွားခွင့်ပြုတာ။ မပေးရင်ရှာမယ် ရစ်မယ် လူတွေ
ပြန်လွှတ်မယ်။၁၈နှစ်မပြည့်ရင် ပြန် ဆိုတာတွေက
မယုံသေးရင် တာချီလိတ်ကို မီဒီယာတွေ သွားကြည့်။
သတင်းဦး သတင်းထူး လိုချင်ရင် ဒါဖတ်ပြီးအထုပ်ပြင်။
We always love & recommend Daw Aung San Su Kyi who isagreat lady.
You can imagine that all generals' & ministers' & Officers' wives who are staying to spend money & to corrupt for country.
Totally cannot compare. No qualifications. Very greedy & selfish all their wives.
Hi Generals , Ministers, Officers
& their Ladies, do not jealous for my previous comment.
Pls. try to learn good attitude & good things fm DASSK.
Seriously want to say you, all, do not jealous & do not do bad things to her. Ok!
Bravo ...Beautiful...we do keep all cartoons....these all are real history..
we are going to show generations to generations.
tq alot all hands.
MMT ရဲ့ commentကို ၁၀၀% ထောက်ခံပါတယ်။
ကာတွန်းဆရာတွေ (နအဖ နဲ့ ဘောင်ဘီချွတ်တွေ ကြီးစိုးတဲ့ အစိုးရ သတင်းစာတွေမှာ ရေးတဲ့ ကာတွန်းဆရာတွေ မပါ)ကို-လေးစားအသိအမှတ်ပြုပါတယ်။